Aragti cusub dilkii Palme - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Aragti cusub dilkii Palme
La cusbooneeyay onsdag 23 maj 2018 kl 10.39 La daabacay onsdag 23 maj 2018 kl 08.46
War-geeyska Filter ayaa maanta soo ban dhigay warar aan horay loo ogsooneyn ee la xiira nin goob joog ku ahaa goobtii lagu dilay Olof Palme 1986.
Kooxda gacanta ku heeysa baarista dilkii madaxii hore ee dawladda Sweden Olof Palme ayaa akhbaartan darteed wareeysiyo la yeelatay qaraabo dhow ee ninka la tuhun-san yahay, sida uu qoray war-geeyska Filter.
Krister Petersson, madaxa kooxda baarista dilka Palme.
–Sabab uma hayo aan kaga faalloodo cidda aannu wareeysi la yeelanno iyo sababta aannu ula yeelanno. Waxaan adeegsanayaa xeerka xogta sirta, sida uu sheegay Krister Peterssson.
Ninka oo aannu ku magacaabi karno Sture, ayaa ahaa qiyaastii kontameeyo kolkii uu dhacayay dilkii Olof Palme.
Wuxuu ka howl galayay meel ku dhow goobta uu falku ka dhacay, isagoona sida uu sheegay ku sugnaa meel 20 mitir u jirta goortii la toogtay Olof Palme isaga oo ay xaaskiisu la socoto.
Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadyoowgii ugu horreeyay ee goobta yimaada.
Goor markhaati ahaan loo wareeysanayay maxkamad uu ku eedeeysnaa Christer Pettersson inuu dilka ka dambeeyay 1989 ayuu sidan sheegay.
–Kolkii aan marshabiyeetiga dhankiisa soo aaday ayaan ku sigtay inaan ku kufo qof dhulka yaala oo dhabarka u yaala. Waxaa ii muuqday dhiig. Waan istaagay aniga oo ka shakisan inaan horay ugu sii socdo godka maxaddada tareenka ama halkaa joogo, sida uu sheegay Sture.
War-bixinnada Sture ayaa is bedbedelayey, kuwaasina oo aan la socon kolka loo barbar dhigo war-bixinnadii ey bixiyeen dadyoowgii kale ee ku sugnaa goobta uu dilku ka dhacay.
Hoggaamiyihii baarista dembiga ee wakhtigaasi Hans Holmér ayaa ninkan ugu magac daray ”maroodi ku sugan dukaan lagu iibiyo maacuunta dhoobada laga sameeyo”, sida uu qabay Holmér wuxuu ninkani baarista ku yeeshay boos ballaaran, hase yeeshee ma aanu geeysan dembiga.
Hase yeeshee uu maanta war-geeyska Filter soo ban-dhigay war-bixinno aan horay loo ogsooneyn ee la xiriira Sture.
Waxaa ka mid ah inuu inuu tababar iyo tartanba uga qeyb qaatay shiishka, sida laga heley xarunta kaydka arrimmaha dagaallada.
Sidoo kale wuxuu war-geeysku sheegay inuu Sture xiriir wanaag-san la lahaa deris caado u lahaa inuu hubka ururiyo. Deriskaasina uu xiise gaar ah u hayay bastooladda nooca Magnum-ka oo laga rido xabado birta gooya, middaasina oo la maleeyneyo in dilka Palme loo isticmaalay.
Hub ururiyaha ayaa horay u dalbaday ogolaansho lahaansho qiyaastii 37 bastooladood oo ugu yaraan shan ka mid ahi ahaayeen nooca loo isticmaalo xabbadda laga hadleyo, sida uu war-geeyska Filter uu maanta qoray.
Sture ayaa geeriyooday horraantii labad kun, halka uu hub ururiyihii geeriyooday dhowr sannadood muddo iminka laga joogo. Iyada oo bastooladihii lagu iibiyey xaraash.
Qoraaga war-bixinta ee war-geeyska Filter ayay wareeysatay kooxda gacanta ku heeysa baarista dilkii Palme, halkaasina oo dabadeed lagu wareeystay saddex qof oo xiriir la leh Sture iyo cidda hubka urursan jirtay.
War-bixin aanu dooneeyn inuu ka faalloodo madaxa kooxda baarista ee dilkii Palme Krister Petersson.
–Goobta dilka uu ka dhacay ayaannu ka amba qaadnaa iyo cidda xiisaha noo yeelan karta, markaa kadib ayaannu sawir ka wayn gelinaa. Howluhu waxay u socdaan is daba joog dhinacyo kala duwan ah, sida uu sheegay Krister Petersson.
"Sture waxaa xaqiiqdii la yiraahdaa magac kale"